FBS ဟာ ရှန်ဟိုင်း ငွေကြေးပြပွဲမှာ ထင်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်
FBS အဖွဲ့သားတွေဟာ ဒီဇင်ဘာ ၁ရက်နေ့မှ ၃ရက်နေ့ အထိကျင်းပတဲ့ ရှန်ဟိုင်းငွေကြေးပြပွဲမှာ ထရိတ်ဒင်းအသိုက်အ၀န်းနဲ့ထိတွေ့ရင်းနှီးခွင့်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံကြီးရလိုက်ပါတယ်.
FBS ဆိုင်ခန်းအမှတ် F47 က ပွဲရဲ့ လူအကျဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်. လူတွေဟာ Forex ထရိတ်ဒင်း အခွင့်အရေးတွေကိုသိချင်လို့ တန်းစီပြီးတောင် နေခဲ့ကြပါတယ်. ကျွန်ုပ်တို့မှလည်း ဗဟုသုတ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်း မျှဝေခြင်းတွေနဲ့အတူ Forex နဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှ ကိုရှင်းလင်းအောင်ပြောပြပေးခဲ့ရတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အခိုက်အတန့်လေး ရခဲ့ပါတယ်.
အထူးသဖြင့် FBS ကုမ္ပဏီက တရုတ်ပြည်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ဘဏ္ဌာရေးနှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ပြပွဲမှာ FBS ရဲ့ သာလွန်တဲ့ ထရိတ်ဒင်းအစီအစဉ်တွေကို ပြသပေးခဲ့ပါတယ်. ဒါ့အပြင် ကုမ္ပဏီရဲ့ သစ္စာရှိမှုနှင့် သဒ္ဒါတရားကိုလည်း ဖော်ပြခွင့်ရခဲ့ပါတယ်. F47 booth ဆိုင်လေးကို လူတွေအများကြီး လာတာ အံ့သြစရာသိပ်မရှိပါဘူး. လူတွေက FBS စိတ်လှုပ်ရှားစွာ လာမေးကြ စိတ်ဝင်တစားရှိကြနဲ့ပါ.
ရှန်ဟိုင်းပြပွဲစင်တာမှာ သုံးရက်တာစလုံးဟာ FBS အဖွဲ့အတွက်အရမ်းကောင်းလွန်းတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေပါ. ကျွန်ုပ်တို့ FBS ရဲ့ spreads တွေအကြောင်း၊ leverage တွေအကြောင်း နဲ့ အရမ်းလန်းတဲ့ ပရိုမိုရှင်းတွေအကြောင်းကို စိတ်အားထက်သန်စွာ လာမေးကြတဲ့သူအများကြီးကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်. တက်ရောက်သူများဟာ trend တွေအကြောင်းစိတ်ဝင်တစားပြောကြပြီး ကျွမ်းကျင်သူတွေဆီမှလည်း အတွေ့အကြုံများကိုနားထောင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်. ထို့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဘဏ္ဌာရေးဆိုင်ရာလုပ်ရှားမှုကြီးမှာ ပါဝင်နေရလို့ ပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပါတယ်.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှန်ဟိုင်း။ နောက်တခါမှ ပြန်ဆုံကြတာပေါ့